जान्नुहोस् ! यस्ता छन् स्वास्थ्यको लागि निगुरो खानुका फाइदाहरु
मे 25, 2019 मे 25, 2019 साइन्स इन्फोटेक4Comments निगुरो, स्वास्थ्य
निगुरो उन्यु प्रजातिको घाँस हो । निगुरोलाई कतिपय ठाउँमा न्युरो वा निहुरो पनि भनिन्छ । विशेषगरी पहाड र तराईको जंगलमा निगुरो पाइन्छ । तर, यसको जातमा केही भिन्नता हुन्छ । निगुरो तरकारीको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । साथै स्वाद पनि फरक हुन्छ । तुलनात्मक रुपमा पहाडको जंगलमा पाइने निगुरो बढी स्वादिलो हुन्छ । पहाडमा कालो निगुरो बढी रुचाइन्छ भने तराईमा हरियो ।
वर्षायाम लागेसँगै कतिले बनजंगलबाट खोजेर र कतिले बजारबाट किनेर निगुरो पकाउने गर्छन् । निगुरोलाई भुटेर वा आलुसँग मिसाएर पनि सेवन गर्न सकिन्छ । निगुरो जस्तै देखिने सबै वनस्पति खान लायक भने हुँदैन । कतिपय निगुरो जस्तै देखिने वनस्पति विषाक्त हुन्छ । निगुरोको तरकारी टिपेर खाँदा कतिपय विरामी परेको खबर पनि बारम्बार आउने गर्छ । त्यसैले आफुले चिनेको अवस्थामा मात्र निगुरो खोज्ने, टिप्ने वा किन्ने गर्नुपर्छ ।
१. पूर्णत जैविक
बनजंगलमा आफै उम्रने भएकाले यसमा कुनै रासयनिक मल वा विषादी प्रयोग हुँदैन । अर्थात यो पूर्णत जैविक हुन्छ । अहिले हामीले खाने धेरैजसो सागसब्जी विषादी मिसाइएको हुन्छ । व्यवसायिक ढंगले उत्पादन गरिएका सागसब्जीमा रासयनिक मल, किटनासक औषधी प्रयोग गरिन्छ । यस्ता सागसब्जी फलाउन, बढाउन, भण्डारण गर्न पनि रसयान वा विषादी मिसाउने गरिन्छ ।
पोषणविद्हरु भन्छन्, ‘यसमा प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन ए लगायतका पोषकतत्व पाइन्छ ।
बालबालिका र गर्भवती महिलालाई त निगुरो अरु बढी लाभदायक छ किनभने निगुरोको तरकारी सेवन गरिहरहँदा भिटामिन प्राकृतिक रुपमै प्राप्त हुन्छ । अतिरिक्त भिटामिनको चक्की चपाइरहनु पर्दैन ।
थाहा पाइराखौ ! यी हुन् क्याल्सियम पाइने खानेकुराहरु →
4 thoughts on “निगुरो खानुका फाइदाहरु”
Pingback: रक्तचाप, क्यान्सरको औषधि पुदिना खानुका फाइदाहरु र प्रयोगहरु
Pingback: आरुवखडा खानुका फाइदाहरु
Pingback: जौको पानी पिउनुका फाइदाहरु
Pingback: स्वास्थ्यमा लागि वियरका फाइदाहरु र वेफाइदाहरु